Apple inowedzera ruzivo rwakadzama rwemukati me 34 nhandare muApple Mepu | IPhone nhau
Apple inowedzera ruzivo rwakadzama nezve zvemukati me 34 nhandare muApple Mepu
Iyo yemukati yenhandare dziri kukura uye kukura. Kusvika pamasuwo ekubhodhira akakodzera kana kuziva kuti ndedzipi zvitoro zvakagara mukati meizvi zvivakwa, kuri kuramba kuchioma. Apple yave iri kushanda kupa vatengi vayo ruzivo urwu muchimiro chemamapu akazara kuburikidza neApple Mepu.
Dzimwe nhandare dzakange dzave kutowedzerwa kuApple's cartography. Nekudaro, iyo rondedzero yakakura kusvika inosvika makumi matatu nemana (zvese muUnited States nekunze kwavo). Uye zvakare, chinhu hachigumire ipapo, asi vakomana vanobva kuCupertino vanoshandawo kuti vakwanise kupa ruzivo rwakadzama paApple Mepu yenzvimbo hombe dzekutenga. Uye vekutanga vatovepo - hongu, chete kubva kuUnited States, izvozvi.
Rondedzero yakadzama haioneke muApple Mepu ruzivo, asi isu tinofanirwa uzviwane muIOS 11. Iko iriko uko uko kwese ruzivo rwakadzama nezve zvemukati memahofisi enhandare akawedzerwa muMepu zvichaonekwa. Kutanga Kwazvose: panguva ino hapana nhandare dzeSpain, kunyange hazvo vari vamwe vevanotevera kujoina runyorwa.
1 Zadza rondedzero yendege
2 Chinyorwa cheZzvimbo dzekutenga
Zadza rondedzero yendege
Berlin Tegel Nhandare TXL
Berlin Schönefeld Nhandare SXF
Edmonton Yendege Nhandare YEG
Newark Rusununguko International Airport EWR
Chinyorwa cheZzvimbo dzekutenga
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inowedzera ruzivo rwakadzama nezve zvemukati me 34 nhandare muApple Mepu
Nintendo Inowedzera Kutsvaga Kwevanogadzira Yayo Smartphone Mitambo
Apple inowedzera Mac warandi kusvika makore matatu muNew Zealand